News – Page 2 – Maskandi Media
Uphekwe ngomhluzu womunye
Akumcimbi liyabhubha nonyaka. Njengoba unyaka usuzilahla kunina nje, umcimbi uphekwe ngomhluzu womunye. Kuyintokozo enkulu kubaculi lokhu okwenzekayo ngoba kuyacaca ukuthi amaholidi azobafica liqinile iphakethe. Umhleli womcimbi obhekwe abaningi Igoduka Music Festival uthi kuyamthokozisa kakhulu ukuzithola ebhekene nendaba enkulu kangaka ngoba lokhu kukhomba ukuthi umcimbi nomcimbi kumele ukhombise
ukwenyusa izinga. “Njengoba imcimbi imningi kangaka nje ngibala umcimbi kaShwi noMtekhala ozobe usegoli. Abalandeli babhekiwe nakhona lapho. Nanku omunye kuDr 3 seconds nakhona kubhelwe abalandli ukuthi bethenge amathikithi bese kuba ukuthi ke ubani oyisho kahle lento. Uyabona uma sithi ‘Kodwa Yini Sesigoduka’ uvele uzibonele nawe ukuthi ungaphutha ngoba uthi uthembeni ngempela”.
“Ziyenzeka eMlazi mhlaka 7 December 2019. Simema bonke abathandi bezinhlobo nhlobo zomculo ezobe zikhona laphana nalabo abazobe befisa ukuzibukela bukhoma abaculi bedlala beshiyelana inkundla ukuthi bephume nkalo zonke bezothokoza kanye nathi. Uyazi ngichazwa yini? Ngichazwa ukuthi kuzobe kuqhuma ibheshu laphana isinene sibuyela eceleni”.
“Uthi usamangazwe ilokho kuqhamuke uskin jean nezintombi zama bikini zikushiye unyakazisa ikhanda ungasazi ukuthi ubukeni uyekeni yingakho sithi kodwa yini sesigoduka. Ngalo mcimbi sifuna abathandi bomculo behambe beye emakhaya bethokozile ngoba sonke sazi ukuthi ukuhlabelela kuyamthokozisa nodabukileyo”.
“Kunabafwethu okuyilokhu bafika emadolobheni kuqala unyaka abangakaze bawuthole umsebenzi nanamuhla sithi ke kubo abeze kulomcimbi khona bezojabula befise ukuphinda bebuye ngoba sonke asikho la sifuna ukubakhona ngokwempilo kodwa asiyeki ukuzama”.
Khuzani “Ngeke ngigadle Osduma ngabanye
Zisele zingama 28 kuphela izinsuku ngaphambi kokuba kudume izandla kudume ihlombe umhlaba wonke njengoba indlovu yaseNdlovini izodedela icwecwe elinamandla kakhulu mhlaka 29 November 2019. Lo mculi sekumthathe isikhathi eside kakhulu ukuthi akhiphe icwecwe elisha ngendlela yokuba matasa nomcimbi omkhulu ekuqaleni konyaka. Uthi uzoququdisa uvoicemail kuphela kule album ngoba usekhathele abantu abakotelayo ukuze badume.
“Indaba yoSduma ngabanye angiyingeni kwayona. Ngiyazi njengoba bengisho mihla namalanga nje balindele ukuthi ngizobaphendula njengoba kuzodilika umthangala nje mhlaka 29 kanti cha angikhoke lapho. Into engizoyenza kulonyaka ngifuna idide abaningi kakhulu ngoba lento yokukotelisa abantu ijika idle mina. Mhlaka 29 November noma kanjani iyenzeka lento ngizobe ngishaya abantu ngengoma”.
Umfoka Mpungose akathandanga ukuchaza ukuthi kungani emane wangaya at all emcimbini kaNgizwe obubanjelwe eThekwini eCurries Fountain. “Kunezinto okumele uzigweme uma ungumuntu. Yebo abaningi bathi sibulala uMaskandi ngalento kodwa nami ngingumuntu ngiyadinga ukuthatha izinqumo ezifanelekile ukuze impilo iqhubeke”.
“Ngangimenywe emcimbini weJazz eMlazi lapho engangena khona kwajabula abantu. Kuyangithokozisa ukuzwa ukuthi umcimbi kamkhaya wami wahamba kahle nakuba ngizwa ngandlebenye ukuthi abaningi bahamba bengasatholanga okungena ephaketheni. Akuzonake kodwa ezami lezo. Ezami zithi mthandi womculo faki order lakho enduneni yakho ukuze uzitholele ishisa le album”. By Khuzani.
Uhambe kahle umcimbi kaNgizwe
Umcimbi kaNgizwe Mchunu obungowokuqala kulonyaka uhambe kahle kakhulu. Lo mcimbi obubanjelwe eCurries Fountin kubikwa ukuthi akukho okubi okwenzekile ngaphandle kwevideo ethilendayo kumanje kumasocial media ethi kunabaculi abadlalele ubala ngaphandle kwemali. “Angikwazi mina lokho. Ubani othe kunabaculi abafike bengamenyiwe? Phela mina lezinto zakofacebook ngibuye ngingazinaki Ngiyezwa kuthiwa kunevideo ethilendayo kodwake angikho vele lapho umcimbi uba nabantu
ababhekene nezinto zonke ezizokwenziwa kuwo. Ezinye zazo yikho ukuhola kwabaculi. ENgingakubieka izwe lonke ukuthi umcimbi uhambe ngendlela ebengifise ukuthi uhambe ngayo akukho la ngikhala khona. Ngizodlulisa okukhulu ukubonga kubaculi abadele konke abebengakwenza bakhetha ukuzohlanganyela nathi singamabhinca basijabulisa zathokoza izihlwele ebeziphume ngobuningi”.
“Ngibonga angikhawuli kubathandi bomculo abafikile ukuzojabula kunye nabaculi ababathandayo. Ngibone nakubantu bonke nje abenze lomcimbi waba impumelelo. Ngiyabonga kuMfanuphetheni umfoka Zulu. Le nsizwa sibambisene nayo kahle kakhulu nasekukhankaseni besinayo namanje sisabambisene. Kodwa engibabonga kakhulu abathenge amathikithi bazongena enkundleni ngba ngaphandle kwabo ngabe awubanga impumelelo lo mcimbi”.
“Ngibonga nakubaxhasi abangixhasile ukuze ngikwazi ukufeza zonke izidingo ngoba inhloso ngqangi ukujabulisa abaculi kanye nabathandi bomculo. Ayikho into engijabulisa njengokubona abantu bami mina nkosi yabo ngoba phela ngiyinkosi yamabhinca bejabulile. Leyo nhlokomo abayenza uma kungena abaculi enkundleni ish lukhulu kimina. Kuyakhomba manje ukuthi iyakude lento yethu nomculo wesintu”. By Ngizwe Mchunu.
“Avumelekile ama-cooler box” – Ngizwe Mchunu
Useqophe umlando umfoka Macingwane ngokufika nento entsha emcimbini kaMaskandi. Ziyenzeka eCurries Fountain eThekwini mhlaka 2 November 2019. Lo mcimbi wokuqala ozokwenziwa uNgizwe Mchunu, usuzitholele ukuthakaselwa abaningi njengoba uMacingwane esevumele ukuthi abathandi bomculo bengene nezicisha koma zabo. “Ngifisa ukubazisa abathandi bomculo ukuthi lo mcimbi uzoqopha umlando njengegama lami”.
“Bese ngibanxusa ukuthi njengoba ngivumele ama-cooler box nje angivuleli udlame kodwa ngenzela ukuthi bezithokozise bengaphakathi kodwa bengeqisi phela begcine sebenza okungafanele. Lona umcimbi omkhulu kulonyaka. Sifuna ukuwuvala ngegiya eliphezulu kakhulu. Ngithi abeze bonke kulo mcimbi kodwa bengaphathi izinkomishi ezingama glass noma izinsinjana”.
“Kuvumeleke ukuthi kungene kungene izinkomishi ezingama plastic lokhu okubizwa ngama plastic cup. Amathikithi ayatholakala eComputicket ezweni lonke kanti ahamba ngenani eliphansi kakhulu. R100 nje kuphela igeneral kanti R500 kuphela i-VIP, indawo yezicukuthwane ke leyo”.
“Okunye engifisa bekwazi abathandi bomculo wesintu ukuthi inkosi yamabhinca uNgizwe uMlando umfoka Macingwane eseNgonyameni, ubahlelele ukuthi bekwazi ukuzizwela ngenkathi zishukana ezikaMagebhula ezagebhula umhlaba kaMaspala kanye neziMpofana ngenkani. Labo abathanda ibhola bekhululeke begcwale ubhavu bazolizwa bukhoma belisheba nengoma”.
Uhambe kahle owokukhumbula Ibhova
Umcimbi obuhlelwe Umzinyathi District wokukhumbula lowo owabe eyinkosi kaMaskandi uMgqumeni Khumalo uhambe kahle kakhulu. Ngokusho kukaJezekhulu Mseleku, uthe kubathokozise kakhuluukubona umndeni wakubo uhlangene kukhona nezingane zeBhova ukuzobungaza umcimbi omkhulu wokukhumbula umfoka Khumalo. “Ayikho into ethokozisa njengokubna umndeni wakho uhlangene”.
“Ngidlulisa amazwi okubonga kakhulu kuMzinyathi District namaphethelo ngendlela owusingathe kahle ngakhona lo mcimbi wokukhumbula umfwethu. Ukuhamba kwale nsizwa kuhlala njalo kusenza sizibuze ukuthi kazi ukube usekhona ngabe ikuphi lento akahamba wayishiya isivele isikuleliya zinga ngesikhashana nje esingatheni ekhona endimeni”.
“Bekukhna zonke izingane zakhe sakuthanda lokho njengomndeni sabonga, namanje sithi lokhu abasenzele khona engathi inkosi ingababusisa kwande okufana nalokhu kungagcini ngoba kuhle sikubonile. Ukukhunjuzw kwabantu ngegalelo lomculi noma lomuntu thizeni owenza into enhle esaphila kuhlala njalo kuyinto ethokozisayo leyo”.
“Bese ngithatha leli thutshana ngemvume yakho ngizicelele ukukhumbuza abathandi bomculo wabafana beBhova ukuthi simatasa sehla senyuka sigcwala izinkalo namathafa sibenzela into enhle. Sibhizi senza umusic video womculo wethu. Sicela ukwesekwa abathandi bomculo wethu namhla siwukhipha ngoba siyazi ukuthi asindawo ngaphandle kosizo lwabo”. By Mseleku.